ဂျာမန် မြို့မှာ အစ္စလာမ် ဆန့် ကျင် ရေး လူ ထောင်နဲ့ချီ ပြီး ဆန္ဒပြ | The FNG
ဂျာမန် မြို့မှာ အစ္စလာမ် ဆန့် ကျင် ရေး လူ ထောင်နဲ့ချီ ပြီး ဆန္ဒပြ
December 16, 2014 · by 21 South News	· in ပြည်ပသတင်း, News.	·
ဂျာမဏီ နိုင်ငံ အရှေ့ ပိုင်း ဒရက်စဒန် ဆို တဲ့ မြို့မှာ လူ ငါးထောင် ကျော်လောက်ဟာ
အစ္စလာမ် ဆန့် ကျင် ရေး နဲ့နာဇီ လိုလား တဲ့ ကြွေးကျော်သံ တွေ နဲ့ မြို့ လယ် လမ်းမ
တွေ မှာ နာရီ အတန်ကြာအောင် ချီတက် ဆန္ဒ ပြ ခဲ့ တယ် လို့ဂျာမန် ရုပ်သံ DW
က ထုတ် လွှင့် သွားပါတယ်။
ဂျာမဏီ က လာတဲ့ သတင်း တွေ မှာ တော့ လူ တစ်သောင်းခွဲ လောက် ချီ တက်ဆန္ဒ ပြခဲ့
တယ် လို့ပြောပါတယ်။ ဒီဆန္ဒ ပြ ပွဲ ကို PEGIDA ဆို တဲ့ အုပ်စု က စီစဉ် တာ ဖြစ်ပါတယ်။
PEGIDA က ပြီး ခဲ့ တဲ့ သီတင်း ပတ် အတွင်း မှာ လူ ခြောက်ထောင် လောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့
နာဇီ လက်သစ် လှုပ်ရှား မှု တစ်ခု ပြု လုပ် အပြီး မှာ အစ္စလာမ် ဆန့် ကျင် ရေး ချီ တက် ပွဲ ကို
ကျင်းပ ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန္ဒ ပြ ဖို့ဆော်သြတဲ့ လက်ဝဲစွန်းရောက် ခေါင်းဆောင် တွေ က ဂျာမဏီ အစိုးရ အဓိပတိ
အန်ဂျာလာ မာကယ် ဟာ လူဝင်မှု ကြီး ကြပ် ရေး ဥပဒေ ရဲ့ဟာ ကွက် တွေ ကြောင့် ဂျာမဏီ
တစ် နိုင်ငံ လုံး ကို အစ္စလာမ် တွေ ၀ါး မြို တော့ မယ် လို့ထောက်ပြ ပါတယ်။
ဆန္ဒ ပြ ပွဲ ကို ရဲ ၁၂၀၀ ကျော် က လုံခြုံ ရေး ယူပေး ပြီး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ ၊ လူ့ အခွင့် အရေး
ဆော် သြ သူ တွေ နဲ့ခရစ္စယန် အချို့က တန်ပြန် ဆန္ဒ ပြ ပွဲ ပြု လုပ် ပြီး ဒရက်စဒန် မှာ နာဇီ
တွေ အတွက် နေရာ မရှိ ၊ ဒရက် စဒန် က အားလုံး အတွက် ဖြစ် တယ် လို့ကြွေး ကျော် ခဲ့ ကြ
ဂျာမဏီ နဲ့ဥရောပ တိုက် ရဲ့အထင် ကရ ဖြစ် တဲ့ ယဉ် ကျေးမှု နဲ့ပညာရေး ဆုံ ချက် မြို့တော်
ဖြစ် တဲ့ ဒရက်စဒန် မှာ ခုလို အစ္စလာမ် ဆန့် ကျင် ရေး ဆန္ဒ ပြ ပွဲ ကို ဂျာမဏီ အစိုးရ က ကန့် 
ကွက် ရှုံ့ချ ခဲ့ ပါတယ်။
ဒရက် စဒန် ဟာ ၁၀ ရာစု နှောင်းပိုင်း ကတည်း က တည်ထောင် ခဲ့ တဲ့ ရှေး ဟောင်း မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
A record number of demonstrators turned out on Monday to march in support of the far-right populist PEGIDA group. The name loosely translates to "Patriotic Europeans Against the Islamization of the West.
← ချောကလက် ကာကာ ဆိုင် ဓားစားခံ အကျပ် အတည်း နာရီ ပေါင်းများ စွာကြာသော် လည်း ရဲ တွေ ၀ိုင်းထား ရုံ လောက် ပဲ တတ်နိုင်
တာလီဘန် တွေ စာသင်ကျောင်းထဲ ၀င်ပစ် လို့လူ ၁၀၀ ကျော် သေ →